Manohana An’ny Nichane Ny Blogoma Raha Tsy Miraharaha Kosa Ny Media Lehibe Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 15:47 GMT
Hankalaza ny Eid ul Adha i Maraoka amin'ny Alahady, ka Tratry ny Eid avy amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Maraokana (Blogoma).
Andeha hivazivazy momba ny…Zazakely!
Mitohy mihamafy hatrany ny adihevitra momba ny Nichane. Ankehitriny, araka ny filazan'i Farid, mitohy hatrany ao amin'ny aterineto izany satria ny bilaogy Maraokana ihany no tsy voakasiky ny fanohanan'ny Media Lehibe (Fr).
The view from Fez nanoratra momba ny fahanginana “manelingelina” eo amin'ny haino aman-jery Maraokana lehibe.
Nitarika fandraràna ny gazety mpanesoeso Nichane ny hetsika tsara rindra nataon'ny hery mpandala fomban-tany. Nanapa-kevitra hiala amin'ny etika sy ny fitsipika ireo mpanao gazety maromaro “namana mpiara-dia ” ary nanatevin-daharana ny hetsika. Tokony tsy hifampiraharahana ny fahalalahan'ny gazety, saingy ho an'ny hafa, toa rehefa sendra olana amin'ny voalohany, dia nisafidy ny tombontsoan'izy ireo manokana izy ireo. Araka izany, namelona ny antoko nentim-paharazana izy ireo ary tsy nanome fanohanana mihitsy ho an'ny governemanta izay ao tafiditra toeran-tsarotra anelanelan'ny fanaovazana tian'ny olona etsy andaniny sy ny fiakaran'ny Islamo ara-politika etsy ankilany.
Eatbees nandefa fanangonan-tsonia hiarovana ny Nichane izay sokajiany fa “tsy fanambarana fanohanana ho an'ny Nichane fotsiny, fa antso hanovàna ny lalàna mifehy ny gazety ao Maraoka.”
Foulla nangataka tamin'ireo mpamaky azy mba haneho hevitra “amim-pahendrena” amin'ity toe-javatra tsy nampoizina ity.
Mety hoe tsy manaiky ny fomban'ny Gazetiboky Nichane nisafidy handrakotra ny lohahevitra ianao, saingy mino aho fa mihevitra tanteraka ianao fa tsy vahaolana ny sivana. Na koa ny managadra mpanoratra sahisahy sy manan-talenta
Samir nizara ny lahatsoratr'i Mohamed Ashab momba ny saritaka.
Na izany aza, mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny laharan'ny firenena momba ny zon'olombelona sy ny fahalalaham-pitenenana ny fandraràna ny gazety. Miteraka olana lehibe momba ny fahalalahan'ny gazety izany: aiza no niatombohany ary aza no hiafarany?
Afaka mamaky ny bilaogy rehetra momba ny fandraràna ny Nichane ao amin'ny gazetibokin'ny bilaogy ao Maraoka (Fr) ianao.
Nanapa-kevitra hanohitra ny sivana mihatra amin'ireo bilaogy Toniziana sasany ireo bilaogera avy ao Tonizia. Bilaogera Maraokana maro no namaly ny antson'ny Toniziana ary namela ny “tranonkalan'izy ireo” ho fotsy (banga) tamin'ny Alatsinainy 25.
eatbees nanoratra lahatsoratra mahaliana momba izany, manontany tena hoe inona no fomba mahomby indrindra hanehoana ny fanoherana ny sivana.
Ny hafa sy ny sasany
Manontany tena (Ar) i Ms Hjiouj raha afaka mahaleo tena miohatra amin'ny Fitondram-Panjakan'i Arabia Saodita i Lameka, Issam kosa mitaraina momba ny fanavakavahana atao amin'ireo vehivavy Maraokana sasany
Rayhane nandefa lahatsoratra momba ilay Maraokana mpiangaly rap BIGG, antiphon kosa rmalahelo ny faharefon’i Mohamed Rouicha(Fr), mpanakanto nentin-drazana Maraokana.
Rafiq addarb nandefa lahatsoratra momba ny boky vaovaon'i Carter Palestine Peace not Apartheid(Ar), raha mampahatsiahy an'ireo mpamaky azy momba an'i Mehdi Ben Barka(Ar) kosa i Said Ben Jebly.
Amin'ny faran'izao lahatsoratra izao dia manainga anao aho mba hitsidika an'i Amine sy Loula ary hankafy ny boaty mozikan'izy ireo.